Ihe ileta na Algeria | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Algeria, Atụmatụ
Otu n’ime ihe karịrị mba iri ise mejupụtara kọntinent Africa bụ Algeria, ala nke biri site na ihe niile n'akụkọ ihe mere eme ya nakwa na, ebe ọ bụ na anyị nọ n'ụdị ụdị anyị, na-echekwa anyị akụ na ihe ochie dị ezigbo mkpa.
Algeria bụ mba buru ibu n'ezie, nwere ugwu na oke osimiri dị egwu, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, banye na oge gara aga nke ala a mara mma ma na-adọrọ mmasị, ị ga-abanye n'ụgbọelu ma mata ya. Kedu ihe a pụrụ ịhụ ma ọ bụ ihe enwere ike ịga na Algeria? Ka anyị lee
2 Njem nlegharị anya Algeria
3 Uzo esi aga gburugburu Algeria
Na ụkpụrụ anyị ga-amata na aha Algeria enweghị mgbagha na Ọchịchị French na obi ọjọọ ya, ruo agha obodo nke 90s na nke furu ya nnukwu ihe, ihe dị ka puku mmadụ iri abụọ. Mana anyi aghaghi iga n'ihu.
Site na ala Algeria agafeela ndị Finishia, ndị Rom, Alaeze Ukwu Byzantium, ndị Ottoman, ndị ohi pirate na ee, French kwa. Ọ bụ ya mere na ọ bụ ite agbaze nke ọdịbendị na ụzọ mbata ugwu, osimiri na ọzara.
Anyị kwuru n'elu na ịnọ n'Africa ha saịtị ihe omumu Ha na-atọ ụtọ nke ukwuu, ya mere ha achọpụtala nke hominids nwere ihe karịrị nde afọ abụọ na Homo Sapiens. Ọzọkwa nwere eserese ọgba na nke oge ochie na ihu ọma taa ihe niile na-echebe n'ime ogige mba. Isi okwu ya bụ na akụ ndị a anwụọla na usoro ọchịchị ndị France.
Eziokwu bụ na France nwere isi ọbara mara mma na Algeria. Mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị, usoro nke ịchị mba ndị malitere na Asia na Africa, mana n'ihe banyere ọchịchị France nke Algeria, France achọghị itinye ya n'ọrụ wee si otú a nwee nnupụisi nke kpebiri nnwere onwe na 1962. Akụkọ ihe mere eme na-agwa anyị na mmegide nke French bụ ọbara dị ukwuu ma nwee ndị na-ekwu na ha bịara ikpochapụ 15% nke ndị Algeria.
Obodo kacha mkpa bụ Algiers, isi obodo. Ọtụtụ n'ime elu ya bụ ọzara, ndị a ma ama Ọzara Sahara, ma e nwekwara oke ohia, steepes na ala mmiri. Kedu akụ na ụba gị? Ọfọn, o nwere mmanụ, ọlaọcha, gas na ọtụtụ ọrụ ịkụ azụ na ọrụ ugbo. Doro anya, obi nke aku na uba ya bu mmanu ma nọrọ 14 na ndepụta nke mba ndị kasị baa ọgaranya.
Njem nlegharị anya Algeria
Ọ dịghị mkpa oge ọ bụla n’afọ ị na-aga, enwere ihe maka onye ọ bụla n’ihi na ọ bụrụ na ị gaa n’oge ọkọchị ma ọ dị ọkụ, enwere ụsọ mmiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ oge oyi ma chọọ ịhụ snow na ski, enwere ugwu. Na isi obodo ị nwere ụfọdụ akwadoro ihe ngosi nka: Na Ebe ngosi Bardo Ọ bụ maka akụkọ ihe mere eme na nkà mmụta ihe ochie na ị ga-enwe ike ịhụ ụfọdụ eserese ọgba nke Tassili N'Aijer National Park, na Sahara. E nwekwara Ihe ngosi nke ọdịnala na Arts ndị mara mma na Museumlọ ihe ngosi nka nke oge a na nka nka na Ebe Ndebe Ihe Ochie nke Mba. E mesịa, ọ bụrụ na ị gaa obodo ndị ọzọ, gbalịa ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere ụlọ ebe a na-edebe ihe ochie n’ihi na nke ọ bụla kpọọ aha.
Ya mere, na obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke Cherchell ị ga-ahụ ihe ochie Roman na Greek na obodo Constantine ihe na ihe osise sitere na saịtị ihe ochie. N’ebe ọ bụla enwere ebe ngosi ihe mgbe ochie na imata ha bu uzo di nma iji bia nso na omenala Algeria.
Ọ bụrụ na ị na-amasị nkà mmụta ihe ochie na akụkọ ihe mere eme mgbe ahụ e nwere asaa kwuru World Heritage saịtị: la Kasbah nke Algiers, las Obodo Berber nke Vall de M'zab, mkpọmkpọ ebe nke Qal'aa Beni Hammad ebe e wusiri ike, ugwu nke Tassili n'Anjer, ya na eserese ya, na mkpọmkpọ ebe nke Djemila, Tipasa na Timgad.
Mkpọmkpọ ebe nke Djemila na-akpọghachi anyị na ọnụnọ ndị Rom na mpaghara ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ naanị otu na ndepụta ahụ, nke a bụ nhọrọ kacha mma. A na-echekwa mkpọmkpọ ebe a nke ọma ma kwụpụta na North Africa. A gbahapụrụ ya na narị afọ nke ise ma ka ị na-agagharị n'okporo ámá ya na-enweghị ihe ọ bụla ị nwere ike iche n'echiche ihe ndụ dị ka ebe ahụ ọtụtụ narị afọ gara aga. O nwekwara ụlọ ngosi ihe nka.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na-amasị gị ihe omume n'èzí na okike i nwere ole na ole Ogige ntụrụndụ mba: Chrea, Djurdjura, Ahaggar, Belezma, El Kala, Gouraya, Tassili n’Aijer, Taza na Tlemcen. Fọdụ bụ ogige ndị dị n'ụsọ oké osimiri (El Kala, Gourraya, Taza), ndị ọzọ dị n'agbata ugwu (Belezma, Chrea, Belezma, na ndị ọzọ), e nwekwara ogige ntụrụndụ na steepes (Djebel Aissa) ma ọ bụ na Sahara (Tassili, l'Ahaggar) . Ọ dịghịkwa enwekarị nke okike.
Knowingmara ebe ndị a na-egosi ịnweta njem na ụlọ ọrụ pụrụ iche ma ọ bụ ozugbo na họtel ahụ. You nwere ike banye maka njem na gwongworo 4 x4, na-agafe Sahara, backgba ịnyịnya ịnyịnya kamel. E nwere ebe mara mma karịsịa maka trekking: Hoggar, na fabulous ugwu, dunes na nkume art na flora na fauna. Mma nke Algeria bu oke ohia n'ihi na mgbe obula, obughi mba mepere emepe nke mere m gha asi na o na agbanye kari.
Ọ bụrụ na ị bụ onye Alakụba, ị ga-achọ ileta alakụba ebe ọ bụ na Islam bụ okpukperechi na - agbasokarị n’obodo a. Enwere ọtụtụ mana ụfọdụ dị mkpa karịa ndị ọzọ site n'echiche nke akụkọ ihe mere eme. Iji maa atụ, Nnukwu ụlọ alakụba nke Tiemcen, nnukwu ụlọ alakụba nke Algeria na Ketchaoua, nke bụ World Heritage dị ka UNESCO si kwuo. Ọ bụrụ na ị bụ Onye Kraịst ị nwere ike ịga ụka Katọlik mara mma n'ihi na ọ dị n'elu ugwu na-ele mmiri isi obodo: Nwanyị anyị nke Africa, nke malitere n’afọ 1872 ma nwee ihe osise okpukpe na ihe osise ndị a tụrụ atụ.
Uzo esi aga gburugburu Algeria
Zọ kachasị mma iji gafere mba a bụ n'ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ụgbọ ala n'ihi na eziokwu bụ na ụgbọ njem nhọrọ nwere oke. Thegbọ oloko ahụ bụ ọkọlọtọ na ọnụahịa tiketi dị ọnụ. Stationsgbọ ndị ahụ na-ekwo ekwo ma na-agbagwoju anya ebe ị kwesịrị ịkpachara anya, rute n'isi ụtụtụ, nwee ezigbo iwu nke asụsụ ahụ ma mara otu o si arụ ọrụ tupu ịdebe ma ọ bụ zụta ihe ọ bụla.
Ị nwere ike gbazite ụgbọ ala Ma dịka ihe siri kwụrụ, enweela mwakpo ndị na-eyi ọha egwu, ọ bụghị ihe m ga-akwado. ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị njem. Enwere ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala mba dị ka Hertz ma ọ bụ AVIS ma ị nwere ike ịgbazite otu na ọdụ ụgbọ elu n'onwe ya ma ọ bụ site na họtel ị na-anọ. E nwere ụdị ụgbọ ala dị iche iche, obere, nnukwu, gwongworo, obere gwongworo. Ihe niile dabere na ebe ị na-aga.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị bụ Spanish, ịchọrọ visa ịbanye Algeria. Ikwesiri ịhazi ya ihe dị ka izu anọ tupu ụbọchị njem gị site na ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya obodo enyeghi visa na oke oke. Ga-enwerịrị mkpuchi njem. Enweghị ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla mana ọ gaghị afụ ụfụ ịnwe nke maka tetanus na ịba ọcha n'anya A na B, n'etiti ndị ọzọ ọ nwere ike bụrụrịrị na ị nwere n'ihi atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi.
Algeria ọ bụ ebe dị egwu? Ọfọn, enwere ike, n'ihi na enwere mkpụrụ ndụ na-arụ ọrụ nke otu ndị na-eyi ọha egwu. Enwee mwakpo n'afọ gara aga na nke kachasị nso, na February na August nke afọ a, 2017, mana ndị ebumnuche abụghị ndị njem ma ndị uwe ojii na ndị isi. A na-atọrọ ndị mba ọzọ site n'oge ruo n'oge, ọkachasị na oke ma ọ bụ na ndịda, yabụ na ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na njem ịga Greater South na oke ala na Niger, Mauritania, Libya ma ọ bụ Mali.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Algeria » Ihe ịga leta Algeria
20 n'ime ihe ncheta kachasị eleta na ụwa II